Apple's Magic Trackpad oo kayar 70 euro | Waxaan ka socdaa mac
Apple's Magic Trackpad wax ka yar 70 euro
Marka hore cadee inaysan ahayn nooca labaad ee trackpad-kan, waa jiilkii ugu horeeyay ee maanta aan si rasmi ah loogu iibin bakhaarka Apple, laakiin waxaa iska cad inaynu wajahayno qiimo aad u wanaagsan kii ugu horeeyay ee Apple trackpads. tan iyo ma gaareyso 70 euro oo maraakiibta lagu soo daray hadii aan nahay kuwa qaaliga ah. Dhab ahaantii trackpads-ka Apple marwalba waxay u ahayd ikhtiyaarkaas isticmaaleyaal badan oo aan jeclayn Magic Mouse, laakiin hadda dad aad u tiro badan ayaa isticmaalaya trackpad-kan loo yaqaan 'Mac' maadaama ay runtii tahay mid raaxo leh.
Qiimaha caadiga ah ee Amazon wuxuu ku saabsan yahay 80 euro sidaa darteed qiimahaas waxaan ku keydineynaa ilaa 10 qiimaheeda isla markaana trackpad-ku waa gebi ahaanba cusub. Toddobaadkan waxaan aragnay qiimo-dhimis weyn oo ku saabsan Apple's Magic Mouse 2 haddana waxaan daawaneynaa bal inaan aragno haddii nooca labaad ee trackpad-ka la sii daayay isla waqtigaas maadaama Mouse-kan cusub ee loo yaqaan 'Magic Mouse' xoogaa hoos loo dhigay, laakiin xilligan oo ay jiraan xoogaa ka jaban ma gaarayo waxa ugu yar ee ay gaareen "duugga" Magic Trackpad.
Farqiga u dhexeeya moodeelkan iyo moodelkan cusub, marka lagu daro cabbir ahaan wax yar ka weynaaday oo caddaan ku dhammaaday, ayaa ah in batteri lagu soo daray moodooyinka cusub si aan loogu tiirin labada beylood ee moodelkii hore lahaa. Haddii aad xiiseyneyso tan Magic trackpad Asalka Apple waxaad si toos ah uga iibsan kartaa xiriiriyehan dukaanka internetka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple's Magic Trackpad wax ka yar 70 euro
Waxaan ku iibinayaa € 45 cusub oo wallapop ah
Miyaad ka adkaatay macOS Sierra syncing?
MacBook Pro wuxuu ku dhacaa gubashada Samsung Galaxy Note 7 iyadoo loo maleynayo inuu ku guuldareysto